कलाकार पल्पसाको मृ:त्यु’को झु:टो खबर यसरी फै’लि’यो ! - Reel Mandu
कलाकार पल्पसाको मृ:त्यु’को झु:टो खबर यसरी फै’लि’यो !
यतीबेला घरमा आराम गरिरहेकी हास्यव्यंग्य अभिनेत्री पल्पसा डंगोलको परिवारलाई सोरबार र मंगलबार धेरैले फोन गरेर पल्पसाको अवस्थाबारे जानकारी लिए । टिकटक चलाउनै कुनै व्यक्तिले यी पल्पसाको तस्बिरमा ‘श्र-द्धा-ञ्जली’ लेखेर सोमबार टिकटक बनाएपछि धेरैले आ-त्तिँ-दै उनका परिवारलाई फोन गरेका हुन् ।
धेरैले उनको टिकटकमा लेखिएको श्र-द्धा-ञ्जलीबारे प्रश्न राख्दा उनका आफ्नाले हैन भनेर प्रस्ट पार्नुपरेको थियो । कसैलाई पनि एक्कासी श्र-द्धा-ञ्जली लेख्दा त्यो व्यक्तिको परिवारदेखि शुभचिन्तकसम्म आ-त्ति-नु स्वाभाविक नै हो । यही समस्या पल्पसा र उनको परिवारले अहिले भोग्नुपरेको छ ।
यो प्रसंगमा हास्यव्यंग्य अभिनेत्री पल्पसाले राजधानीसँग भनिन्, ‘टिकटकको भ्युज बढाउने नाममा जिउँदो मान्छेलाई यसरी हार्दिक श्र-द्धा-ञ्ज-ली लेखेर भिडियो लोड गर्दा कति पी-डा हु-न्छ होला । यस्तै पी-डा अ-हि-ले म र मेरो परिवारले भोग्नुपरेको छ,’ उनले अगाडि थपिन्, ‘म स्वास्थ्य उ-प-चार गराइरहेको बेला टिकटिक चलाउनेहरूले मेरो तस्बिरमा श्र-द्धा-ञ्ज-ली अ-र्प-ण गरेर पटकपटक भिडियो लोड गर्दै
मलाई जि-उँदै मा-रिर-हेका छन् । गत महिना पनि मलाई यस्तो पी-डा दि-इए-को थियो र हिजो मंगलबार पनि यस्तै पी-डा-दा-यी कार्य टिकटक चलाउनेहरूले गरेका छन् ।’ हा-स्य-व्यं-ग्य अभिनेत्री पल्पसाले टिकटकमा भ्यु-ज बढाउन यसरी जि-उँ-दै मानिसलाई मा-र्ने काम बन्द गर्न आग्रह गरेकी छन् । यस्तो कार्यले आफूहरूजस्ता बि-रा-मीलाई मा-नसि-क रूपमा साह्रै त-ना-व हुने
र मनोबल खस्कने पनि उनले बताएकी छन् । अहिलेको अवस्था आफूलाई हौ-स-ला र साथको आवश्यकता भएको पनि उनको कथन छ । हास्य अभिनेत्री पल्पसा डंगोलको स्वास्थ्यमा केही सु-धार आएको छ । गत महिना दुईवटै मिर्गौलाले काम गर्न छा-डेप-छि काठमाडौंको त्रिविवि शिक्षण अ-स्प-ता-लमा भर्ना भएकी उनी केही समय उ-प-चा-रपछि
अहिले घरमै आ-राम गरिरहेकी छन् । उनले अहिले ग्वार्कोस्थित किस्ट अ-स्प-ता-लमा डा-इलसि-स गरिरहेकी छन् । आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे उनले राजधानीसँग भनिन्,पहिलाको भन्दा केही सु-धा-र भएको छ । अहिले आफैं नु-हा-उने, खाना बनाएर खाने तथा सामान्य हिँ-डडु-ल गर्न सक्ने भएकी छु ।’
करिब एक महिना शिक्षण अ-स्प-ता-ल बसेर घर फर्किएकी उनी पछिल्लो समय की-र्ति-पु-रको पाँगास्थित मा-इतमा बस्दै आएकी छन् । अहिले सातामा दुईपटक किस्ट अ-स्पता-लमा डाइ-लसि-स गरिरहेको पनि उनले जानकारी गराइन् । यी अभिनेत्रीले अबको केही समयमा मि-र्गौ-ला प्र-त्या-रो-प-ण गर्ने पनि बताएकी छन् ।
एक जना आफन्त मि-र्गौ-ला दिन तयार भएको र मि-र्गौ-ला प्र-त्या-रोप-णका लागि अहिले आवश्यक स्वास्थ्य प-रीक्ष-ण पनि गरिरहेको उनले बताइन् । सबै परीक्षण सकिएको र अब आफूहरूको मि-र्गौ-ला ‘म्या-चिङ’को परीक्षण यो साता हुने पनि उनले बताइन् । यदि म्या-चिङ भएको खण्डमा आफू मि-र्गौला प्र-त्या-रोप-णको तयारीमा जु-ट्ने पनि उनले जनाएकी छन् ।